sidii aad u heli kaarka hadiyadda Spotify
Kaararka hadiyadda Spotify waa sida wax kaararka hadiyadda kale run ahaantii. Oo iyagu iminka waa laga helaa 3 Wayse (qiimaha kala duwan ee dalalka kala duwan dabcan) - $ 10, $ 30 iyo $ 60. Waxaad iibsan karo kaadhadhka kuwaas oo loogu talogalay / Times qaddar aan xad lahayn Spotify.
Kuwani waa mid ka mid ah hadiyada ugu wanaagsan ee aad siin karto mid ka mid ah kuwii ku caashaqi jiray music ka mid ah qoyskaaga iyo saaxiibadaa ah. Waxay kuu tarto doonaa iyaga oo aad u badan haddii ay yihiin adeegyada music geeyo online.
Marka aad soo iibsato, kuwaas oo kaararka hadiyadda Spotify, ay la iman code ah in aad u baahan tahay si ay u galaan oo sidaas furto qiimaha kaarka hadiyadda ee xisaabtaada Spotify. Xidhiidhku waa website halkaas oo aadan iibsan karo, hadiyad card / code waa sida soo socda: http://www.spotify.com/redeem.
Qaybta 1.Ways si aad u hesho kaarka hadiyadda Spotify
Qaybta 2.How in la isticmaalo oo ah kaarka hadiyadda Spotify
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad naftaada oo ah kaarka hadiyadda Spotify ka heli kartaa. Waxaan la hadlayaan iyaga doonaa kooban sida hoos ku siiyo.
1. Weydii saaxiibadaa hadiyad
Waxaad mar walba codsan kartaa kaarka hadiyadda Spotify ka aad jeceshahay iyo saaxiibada munaasabadaha gaarka ah. Waxay si fudud ayaa laga heli karaa internetka oo qof raba si aad u hesho waxaad u hadiyad ahaan ugu yeelan dhibaato ah kaarka hadiyadda Spotify online idiin.
2. Inuu gato oo ah kaarka hadiyadda Spotify online
Waxaad sidoo kale u tagi kartaa https://www.spotify.com/us/gift-card/
ama dhowr idman iibiya online ah Spotify iyo iibsan kaararka hadiyadda online. Si fudud, gasho in aad xisaabta Spotify, riix iibsan doorasho e-card ah, geli faahfaahinta shakhsiga ah sida loo baahan yahay, dooranayaan bixinta iyo guji Send u leedahay in kaarka hadiyadda idiin dhiibay ama saaxiibadaa si.
3. kaararka hadiyadda Buy Spotify dukaano ansixiyay
Dalka Maraykanka, waxaad geli kartaa Walmart ah, 7-Eleven, Target iyo sida superstores kale oo badan oo waxaad soo iibsataa oo ah kaarka hadiyadda Spotify. Waa in si fudud!
4. Hel waxaa ka goobood ee online in bixi hadiyaddii Sportify kaararka / codes free
Waxaa jira goobo dhowr ah oo sheegtay in la iska siiyo kaararka hadiyadda Spotify lacag la'aan ah. Waa in aad ka taxadartaa halka socda la Doorashadan sida ay u adag tahay in la xaqiijiyo in ay yihiin kuwo dhab ah ama aan, Weli way ka qiimo la siiyo isku day ah. Halkan waxaa ku qoran dhawr tusaale oo waxaan ka helay on Google: spotifycoupon.blogspot.com, onlinespotifycode.com iyo spotifyfreeaccount.com iwm
5. Iibso kaarka hadiyadda Spotify ka PayPal Digital Gifts
Tani waa ilo lagu kalsoon yahay u iibsato kaarka hadiyadda Spotify la gabi ahaanba aan lahayn wax khatar ah oo ah caabuq furin xun ama wax kale. Tag https://www.paypal-gifts.com oo si fudud iibsato kaarka hadiyadda la qiimo aad u baahan tahay.
Haddii aad heshay kaarka hadiyadda Spotify, haddii mid ka mid jireed ama magac ah, waa si caddaalad ah u fudud in ay iyaga quseeya in aad xisaabta Spotify. Ha noo sharax sii aad u.
Xaaladdan oo kale waxa aad heshay waa kaar jirka hadiyad u Spotify,
markaas oo dhan in aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad si fudud u gasho in aad xisaabta Spotify iyo dooro Payment Options. Tani waxay ku siin doonaa fursad u ku daray labada credit card ama code ah kaarka hadiyadda u socday qaddar la xisaabtaada Spotify. Si fudud u geli furaha kaarka hadiyadda (siiyey xagga dambe ee card) si aad u furto qiimaha kaarka hadiyadda iyo waa in markaas si toos ah u codsatay in aad xisaabta.
Haddii waxa aad heshay waa / kaarka hadiyadda ah online dalwaddii u Spotify,
ka dibna si fudud aad qabto in la raaco tilmaamaha la siiyey in email ah in aad waa in ay heleen. Inta badan, waxa ku jira link ah in aad kaliya u leeyihiin in ay raacaan. Waxay ku weydiin doonaa inaad gasho si aad xisaabta Spotify iyo in geeddi-socodka in aad xisaabta codsan doonaa kaarka hadiyadda dalwaddii si toos ah iyo sidoo kale.
> Resource > Spotify > ma u ogtahay Siyaabo si aad Spotify Gift Card